म प्र*धानमन्त्री भए भने नेपाल यु*रोप भन्दा वि*कसित हुन्छ : डा. भट्टराई
काठमाडौं । प्रचण्ड–बाबुराम एक समयको चर्चित जोडी हो । तर पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई विपरित दिशामा रहेका छन् । भट्टराईले आफ्नो पार्टी काठमाडौंको मःम पसल जस्तो नभएको बताउँनु भएको छ । बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूराना पार्टीहरु भन्दा पार्टी फरक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई तपाईहरु काठमाडौमा खोलिएका १० वटा पसलमा अर्को थपिएर ११ औं बने जस्तो होइन । मःम पसल थपिए संस्था बढ्ने हो ।
तर टेस्ट पुरानै । हाम्रो पार्टी त्यो होइन । नयाँ टेस्टसहित हो ।’ एक फरक प्रशंगमा अहिलेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पुर्ण रुपमा असफल भएको ब्याख्या गर्नुभएको छ । दुई तिहाइको सरकारबाट जनताले आशा गर्ने कुनै ठाउँ नभएको भन्दै जनताको पक्षमा कुनै काम गर्न नसकेकाले यो सरकारबाट आशा गर्नु व्यर्थ हुने दाबी गर्नुभयो । सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत कुनै काम हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब यो सरकारबाट के आशा गर्ने, यो सरकारको काम देखेर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सरकारबाट बाहिरियो । संघीय समाजवादी फोरम पनि त्यही बाटोमा छ । केही गर्छ कि भन्ने सबैको आशा सरकारले गलत साबित ग‍र्यो ।’ संयोजक भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको माओवादीले लिएको बाटो गलत भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
यो पनि राष्ट्रपति भण्डारी हेलिकोप्टर चढेर शीतल निवासबाट विमानस्थलसम्म
काठमाण्डौ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी म्यानमार जाने क्रममा शीतल निवासदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म हेलिकोप्टरमा जानुभएको छ । बुधबार बिहान उहाँ शीतल निवासबाट हेलिकोप्टर चढेर विमानस्थल पुग्नुभएको हो । कार्यालय समयमा सडकमार्गबाट विमानस्थल जाँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती हुने भन्दै उहाँ हेलिकोप्टरमा चढेर विमानस्थल पुग्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले शितल निवासबाट हेलिकोप्टर चढेर विमानस्थल गएको यो पहिलोपटक हो । यसअघि राष्ट्रपतिको सवारीको बेला सडकमार्ग बन्द हुने गरेकोमा आलोचना हुँदै आएको थियो ।
म्यानमारका राष्ट्रपति ऊ विन मिन्टको निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै म्यानमार जानुभएको हो । बुधबार म्यानमार पुगेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले म्यानमारका समकक्षी मिन्टसँग दुईपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ । उहाँले म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ । उहाँले पिङ ओ लिङमा रहेका नेपालीभाषीसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । उहाँले बगानमा युनेस्को विश्वसम्पदा क्षेत्र, पूर्वराजधानी सहर यंगुनका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका ठाउँका पनि भ्रमण गर्ने तयारी छ । राष्ट्रपति भण्डारी म्यानमारबाटै जापान पनि जाने तयारी छ । जापानका नयाँ राजा नारुहितोको गद्दी आरोहण समारोहमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी उपस्थित हुनुहुनेछ । म्यानमार र जापानको भ्रमण सकेर राष्ट्रपति भण्डारी आउँदो ६ गते स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ ।
यो पनि पारस सरकार मसँग डाँको छोडेर धेरै पटक रुनु भएको छ :सोनिका रोकाया
काठमान्डौ । थाइल्याण्डमा रहँदा कनिका चैसन नाम गरेकी थाई युवतीसँगको स’म्बन्धका कारण वि’वादित बनेका पूर्व युवराज पारस शाहको नाम एक नेपाली यूट्यूबर तथा मोडलसँग जो’डिएको छ। शाहको सोनिका रोकाया नामकी यूट्यूबर तथा मोडलसँग नाम जो’डिएको हो। दरवारमार्गको एक रेष्टुरेन्टसहितका केही स्थानमा बा’क्लैरूपमा एकसाथ दे’खिन थालेपछि उनीहरूबीच नि’कटताका बारेमा च’र्चा चलेको हो। यस्तैमा पूर्व युवराज पारसले सोनिकालाई हार्ले डे’बिडसन बाइकको पछाडि राखेर हुँ’किएको भिडियो टिकटकमा सार्वजनिक भएपछि सो च’र्चा थप ग’र्माएको हो।
यसक्रममा उनी एकपटक ला’गुऔ’षधसहित स’मातिए भने उनलाई हृ’दयघात समेत भयो। हृ’दयघातबाट स्वा’स्थ्यलाभ गरेपछि केही वर्षयता नेपाल बस्न लागेका पारसले केही समयप छिसम्म म’दिरा से’वन छा’डेको बताइएको भए पनि पछिल्लो समय उनी पुनः म’दिरामा डु’ब्न थालेको दा’बी गरिँदै आइएको छ। पारसको आ’नीबानी सु’धार नभएकाले उनी नेपाल फ’र्किए पनि निर्मल निवासमा नब’सी बाहिर नै ब’स्दै आएका छन्